Uhlalutyo lwaManzi okusela, uMvavanyi waManzi oMgangatho oPhezulu- iSinsche
Singobani kwaye senza ntoni?
Iinkcukacha ezithe xaxeYIYA
I-Sinsche ngumvelisi kunye nomthengisi wehlabathi wobuchwephesha bobuchwephesha, obenzelwe uhlalutyo kunye nokubeka iliso emanzini. Eyilwe ngo-2007 e-Shenzhen PR China, iqela lethu leengcali ezintsha zizinikele ekuphuhliseni nasekuxhaseni iindlela ezintsha kunye nezixhobo, ukwenza iziphumo ezikhawulezayo, ezichanekileyo kunye nezindleko ezivela ngaphakathi kwezona ndawo zinzima, ukuya kwilabhoratri yanamhlanje.
Umgca obanzi weSinsche wezixhobo kunye neekhemesti zenziwe ngaphezu kweminyaka eli-14 ukwenza uhlalutyo lwamanzi lube lula, lube bhetele - lukhawuleze, luhlaza kwaye lufundise ngakumbi.
I-TA-98 ye-Spectrophotometer ebonakalayo
Q-CL501 Imibala ephathekayo yeChlorine yasimahla, ...
I-TC-01 i-Digital Digital Titrator
Z-T700 / Z-T500 ezikrelekrele Multi-parameters Ana ...
Umgangatho ophezulu wexabiso eliphantsi Ngaba uyenza imitha yokujonga izilwanyana zasemanzini ...
Funda ngakumbi malunga neeparameter zomgangatho wamanzi:
Ukutya kunye nesiselo
Ingxaki eqhelekileyo yokuFumanisa uMgangatho waManzi oMdaka
Ehlotyeni, iindawo ezinkulu zokudada ziye zaba yindawo yokupholisa kwimithendeleko. Umgangatho wokuvavanywa komgangatho wamanzi echibini ayisiyiyo kuphela inkxalabo yabathengi, kodwa ikwayiyo into yovavanyo oluphambili lwesebe lokongamela ezempilo. Ngokumalunga nokufunyanwa kunye nolawulo ...
Ukuchongwa kweChlorine eseleyo: Kunuka kodwa akukho mbala?
Kwimeko yethu yovavanyo, zininzi izikhombisi ezinokulinganiswa, Intsalela yeklorini yenye yezalathi ezihlala zifuna ukumiselwa. Kutshanje, sifumene ingxelo evela kubasebenzisi: Xa usebenzisa indlela ye-DPD yokulinganisa intsalela yeklorini, kucacile ukuba inuka ivumba elinzima, kodwa uvavanyo ...
Iimpendulo kwiNgxaki yaManzi aSelwayo yokuSela
Amanzi sisiseko sobomi, amanzi okusela abaluleke ngakumbi kunokutya. Ngokuqhubeka kokuqaqanjiswa kolwazi lwezempilo lwabantu, amanzi etephu ahlawulwe ngakumbi nangakumbi ziindawo zonke zobomi. Namhlanje, i-Sinsche combs imiba emininzi eshushu, ukuze ube nokuqonda okunzulu ...